Iran: Mibilaogy mahavoaheloka ho faty? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2019 4:11 GMT
Nifidy ny volavolan-dalàna mikatsaka ny “hanamafisana ny sazy amin'ny fanakorontanana ny saim-bahoaka ao amin'ny fiarahamonina” ny parlemantera Iraniana. Miampy ny lisitry ny heloka mahazo ny fanamelohana ho faty ny andininy amin'ity volavolan-dalàna ity toy ny “fananganana tranonkala sy tranonkalam-bilaogy mampiroborobo ny kolikoly, ny fivarotan-tena ary ny fivadiham-pinoana.” .
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nisy bilaogera Iraniana nogadraina ary voasivana ny tranokalan'ny bilaogera maro. Matahotra ireo bilaogera fa mety ho melohin'ny fitsarana ho mpanao heloka bevava izy ireo rehefa nandany ity volavolan-dalàna ity ny parlemanta Iraniana. Tsy nisy ny fanamaritana ny dikan'ny hoe “fanakorontanana ny saim-bahoaka ao amin'ny fiarahamonina”.
Tsy niavaka tao Iran ny fifanakalozan-kevitra tahaka izao momba ny bilaogy. Mampiseho izany fa tsy ny fanivanana bilaogy ihany no kasain'ny manampahefana maro atao fa ny hanafoanana ireo bilaogera ihany koa !
Politikam-panjakana hanaraha-maso ny bilaogy
Herintaona sy tapany lasa izay, nitaky ny tokony hisoratan'ny bilaogera anarana sy hanome ny anarany sy ny adiresiny ao amin'ny tranonkala antsoina hoe Samandehi ny governemanta Iraniana. Olona maro no nihevitra fa hanamora ny fanenjehan'ny fitsarana azy ireo ny dingana toy izany.
Nanohitra ireo bilaogera ary maro no namoaka sora-baventy hoe “Tsy hanoratra anarana ny bilaogiko / tranonkalako aho” tao amin'ny bilaoginy. Nahatsapa ny governemanta noho izany fa tsy afaka hifehy tanteraka ny toe-draharaha izy ireo na hanery ireo bilaogy tsy maintsy hisoratra anarana.
Hanaraka ny dian'i Yemen ve?
Mampalahelo fa tsy sambany ao Afovoany Atsinanana sy eto amin'izao tontolo izao ity raharaha ao Iran ity. Tamin'ny volana Aprily 2008, niresaka momba ny fitsipika vaovao henjana noraisin'i Yemen ny MidEastYouth tao anatin'ny tatitra avy amin'ny teny nataon‘i Walid Al-Saqaf, mpitantana ny YemenPortal.net:
“Tamin'ity herinandro ity, nandrahona hitory ireo vohikalam-baovao izay ‘mandrisika fankahalana’ na ‘manafintohina ny tombontsoam-pirenena’ ny Minisitry ny Serasera niaraka tamin'ireo fialantsiny hafa mahazatra izay matetika ampiasainy mba hanenjehana ny mpanao gazety. Vao mainka niha-henjana kokoa ny fandrahonana ho an'ny tranonkala satria tsy ny lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety no hampiasain'ny governemanta fa ny fehezan-dalàna famaizana . Midika izany fa mety hahazo fanamelohana ho faty mihitsy ny mpitantana tranonkala . “
“Aza kivy ianareo fa ho vonoinay araka ny lalàna “
Hoy i Nikahang, mpanao sariitatra an-tserasera fanta-daza Iraniana sady bilaogera:
raha lany ity volavolan-dalàna ity, dia hiorina amin'ny fandikana ny eritreritra ny zava-drehetra ary heverina ho ivon-toerana mamotika ny fivavahan'ny olona ny bilaogera tsotra ! Inona no azoko ambara? Ny olona izay manakorontana ny saim-bahoaka ihany no afaka manohana ny zavatra toy izany.
Nanoratra i Mirza Kasra Bakhtyari fa nanohana ny fifanakalozan-kevitra momba ity volavolan-dalàna ity i Ali Larijani, Filohan'ny Antenimiera Iraniana ary nilaza ihany koa izy fa niresaka nandritra ny ora maromaro niaraka tamin'ny Fitsarana momba izany ry zareoGhomarashegahneh says [Fa]:
Hoy i Ghomarashegahneh hoe:
Manameloka ny bilaogera mora foana noho ny teo aloha ny filazana ny hoe ‘famahanana bilaogy’ ho anisan'ny heloka bevava toy ny fakàna an-keriny, ny fanolanana, ny fandrobana mitam-piadiana … Ny lalàna toy izany no hanimba ny saim-bahoaka eo amin'ny fiarahamonina noho ireo bilaogera mampalahelo izay tsy mahafantatra izay miandry azy ireo.
Nanampy ilay bilaogera fa ny krizy ara-toekarena sy ny politika famoretana ataon'ny governemanta no tena antony mahatonga ny olana amin'ny fanakorontanan-tsaina .
Nampitandrina i Bazri : “Tokony hanao izay tsara indrindra vitantsika isika hanakanana ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta tsy hanaiky ity volavolan-dalàna ity. Ho tara loatra izany raha hiandry ny ampitso. Mora ny miampanga bilaogera iray amin'ny fivadiham-pinoana sy ny kolikoly. Aleo lazaina amin'ny Parlemanta fa tsy heloka bevava ny maneho hevitra tsy mitovy ka tsy tokony hosaziana amin'ny fanamelohana ho faty .
Namoaka sariitatra izay ahitana ny mpitondra fivavahana iray miteny amin'ny vehivavy izay efa ho vonoina ho faty hoe: “Aza taitra fa ho vonoinay araka ny lalàna ianao” i Balocuh.
Namoaka sariitatra iray hafa izay ahitana an'i Ali Larijani, mpitondra tenin'ny parlemanta, “manatanteraka ny fanamelohana ho faty bilaogera iray” i Nikahang, mpanao sariitatra malaza sady bilaogera.